Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Madaxa WHO: COVID-19 Mowjadaha Saddexaad ee Caalamiga ah Waa Halkan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Agaasimaha Guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus
Kala duwanaanshaha Delta wuxuu hadda ku sugan yahay in ka badan 111 dal, sidaas darteed WHO waxay rajeyneysaa inay dhowaan noqon doonto culeyska ugu weyn ee COVID-19 ee adduunka oo dhan ku wareegaya, haddii uusan horey u sii jirin.
Toddobaadkii la soo dhaafay kiisaska COVID-19 ayaa ku sii kordhayay adduunka, dhimashaduna waxay bilaabeen inay mar kale koraan.
Madaxa WHO wuxuu dhaleeceeyay kala duwanaanshaha naxdinta leh ee baahinta tallaalka adduunka.
Helitaanka tallaal la'aanta ayaa ka dhigeysa inta badan dadka adduunka "naxariistiisa fayraska."
Madaxa Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ku dhawaaqay maanta in adduunku hadda ku jiro marxaladaha hore ee mawjad saddexaad oo ah COVID-19.
Agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa khudbadiisii ​​furitaanka ku sheegay kulankii 8aad ee Guddiga Gurmadka IHR ee COVID-19 in usbuucii la soo dhaafay kiisaska COVID-19 ay sii kordhayaan adduunka, dhimashaduna ay bilaabeen inay mar kale koraan.
"Waxaan hadda ku jirnaa marxaladihii ugu horreeyay ee mowjad saddexaad," ayuu yiri Ghebreyesus.
Intaa waxaa dheer, "dhimashadu way sii kordheysaa mar labaad" ka dib 10 toddobaadyo hoos u dhac ah, ayuu raaciyay. “Kala duwanaanshaha Delta waa mid ka mid ah darawalada ugu waaweyn ee kororka hadda ee gudbinta, waxaana shidaalka ku sii kordhiyay isku darka bulshada iyo dhaqdhaqaaqa, iyo adeegsiga aan habooneyn ee caafimaadka bulshada iyo talaabooyinka bulshada,” ayuu yiri.
Sida laga soo xigtay Ghebreyesus, "kala duwanaanshaha Delta wuxuu hadda ku sugan yahay in ka badan 111 dal," sidaa darteed WHO waxay rajeyneysaa "inay dhowaan noqon doonto culeyska ugu weyn ee COVID-19 ee adduunka oo dhan ku faafaya, haddii uusan horey u jirin."
The WHO madaxa ayaa ku dhaleeceeyay "farqiga naxdinta leh ee baahinta tallaalka adduunka". Dhanka kale, helitaan la'aanta talaalka ayaa ka dhigeysa inta badan dadka aduunka "naxariistiisa viruska", agaasimaha guud ee WHO ayaa yiri isagoo kahadlaya "wadamo badan wali ma helin wax talaal ah, badankoodna ma helin ku filan".